Ihe ize ndụ nke ọkụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Spen niile dị n'etiti nnukwu elu na oke | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọnọdụ okpomọkụ dị elu na Fraịde a, Ọgọstụ 18 na-agbasi ike n'ọtụtụ mba, ha zụlitere Odi oku di oke njo kachasi n 'mba mba niile, tinyere agwaetiti. Naanị ụsọ oké osimiri nke Galicia dị ntakịrị dị ize ndụ, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oke osimiri Cantabrian dum gụnyere nnukwu akụkụ nke Asturias. Akụkụ ụfọdụ nke Murcia na Alicante nke dị nso n'ụsọ oké osimiri ahụ ihe egwu ahụ karịrị adaba.
Oké okpomọkụ ahụ dakwasịrị mba ahụ dum ụnyaahụ, emeela ka ọtụtụ mba na-eche nche. Agbanyeghị na atụ anya na ọnọdụ okpomọkụ ga-amalite ibelata site na echi, ihe mgbaàmà ga-aga n'ihu ruo oke. Otu agwaetiti echi Satọdee ga-anọgide na-enwe nnukwu ihe egwu, belụsọ maka ụfọdụ mpaghara agafeghị oke na Canary Islands. Ebe ndị ọzọ a ga-ekpughere ga-abụ Andalusia, ógbè Valladolid, Segovia, Zaragoza, akụkụ nke Pyrenees nke Huesca na mpaghara mpaghara mpaghara Ávila, Cuenca na Toledo. Galicia, n'aka nke ọzọ, ihe egwu ga-abawanye nke ukwuu.
Ebe kachasị dị ize ndụ
Maapụ ihe egwu ọkụ nke AEMET nyere, August 18
Mpaghara niile nọ n'ihe egwu dị egwu n’ọkụ gbara otutu obodo. Segovia, Soria, Guadalajara, na nnukwu akụkụ nke Barcelona, ​​Zaragoza, Burgos, Valladolid na Ávila so na mpaghara ndị dị na mpaghara Northern nwere nnukwu ihe egwu. Site na Sud otu, anyị na-ahụ ọtụtụ Extremadura na mpaghara Ciudad Real dị oke egwu. Nakwa akụkụ ụfọdụ nke Andalusia, ebe a na-atụ anya na echi nnukwu akụkụ nke obodo ga-aga n'ihu na oke egwu.
Portugal kwupụtara ụnyaahụ ọnọdụ nke ọha na eze n'ihi egwu nke ọkụ. Obodo ahụ, mgbe ọ nwụsịrị ọkụ ọkụ kachasị ọhụrụ, emeela ka ndị agha ndị agha, n'etiti ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ dịka ndị uwe ojii, na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ, iji dịrị njikere maka ọgba aghara nwere ike ibilite na ngwụsị izu niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Ihe egwu oku maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Spen niile dị n'etiti oke na oke